Inweta ego site na blog博客ịfe fe mfeịchụego karia itemaliteazụmahịaomenala maịgaghịeleba iwu iwumkpochapụanya maọbụtinye maka ikikereụlọ.
Otu n’ime iwu iwukachasịmkpa madịmkpabụiwu nzuzo，nke ana-emetụtaweebụsaịtị，nnukwu maọbobe obere。 Ọbụrụnaịbụobereazụmahịamaọbụọbụnadị博客na-enweghịego网站na ebenrụọrụweebụgịmaejighịn’aka ihe kpataraụwanambụgaga-achọotu，ịnwere ike ij.
Oheredịelu nke naịga-adị（ọbụrụgodịnaịmaghịya）-ichikotaụdịozi d icheiche site nandịbịagị，na-edebe hanchịkọta，maọbụna-egosipụtamgbasa。 Makaọtụtụn’ime ihe omumendịa，oherendịdịeludịelu naachọrọkaịnwee iwu nzuzo.
1.2 Iwu Nzuzo na mbadịiche iche
2 Tinye Nzuzo Nzuzo G’n’ime易北河Taa
Iwu nzuzobụakwụkwọna-akọwaihe gbasara ozi nkeonweịnakọtarasite n’akandịụrụgị，otuịsi eji ya，na otu si si edebe ya.
I ob obula a choro bu dabere na iwu ma obu iwu ndi ozo。 Ọzọkwa，nkọwanke ihebụ "奥兹·恩昆威" dịgasị，manaọna-agụnyeaha naadreesị电子邮件，na mgbeụfọdụ，adreesịIP na kukinchọgharị.
Na ogeọmụma，数据来自egoọhụrụ。 Ozi nzuzo nkendịmmadụn’otu n’otu bara ezigbo uru nyendịmgbasa ozi，ụlọrrọ，nagọọmentị.
Taa，ọtụtụmba na-eleba anya na nzuzodịka ikikedịmkpa nkeụmụmmadụ，ha agafewokwa iwu iji chebendịmmadụ网站n’iheọmụmahana-anakọtama jirina-enweghịiheọmụmaha。 Iwu nzuzo nzuzona-achọkarịna onyeọbụlana-anakọtaozi nkeonwe site na ebenrụọrụweebụha ga-enwenkwupụtana otu na ihe kpatara ha ji eme ya.
Dịkaọtụtụiwu nzuzo，ịwe pe pe naụụna na na na na na na eon ma ma ma ma ma maịma ma bie ma bie ma bie bie bie ma.
Iwu Nzuzo na mbadịiche iche
Iwu Nzuzo澳大利亚（APPs） bụchịkọtankeụkpụrụ13 na-eduzi njikwa ozi nkeonwe。 Dịkaụkpụrụndịa sidị，ịgahghịijikwa ozi nkeonwe naụzọa na-emeghe na nke a na-emeghe.
Ntuziaka nchekwa data nke欧洲联盟数据1998 ekwu na onyeọbụlanhazi data nke onwe yaaghaghịime yan’ụzọziri ezi ma kwadoro。 Iji mee kanchịkọtadata weere yadịka iwu kwadoro，ga-anakọtadatananịmakaakọwapụtarankeọma，nke doro anya any n na zke ezi.
Nzuzo UK na UsoroNtanetịElectronic 2003 na-egbochi ojiji nke kuki nateknụzụndịyiri ya nangwaọrụndịọrụọgwụlama ndrọrụ1）doro anya banyere nzube nke ojiji nke kuki na 2）enyewo nkwenye ha.
Iubena enyerendịụrụakaịmepụtaiwu nzuzo nanzọụkwụat：
Akụkụkasịmma nke iubenda-iwu nzuzogịka akwadoro na sava ha。 Nke apụtarana usoroahụnwereikeịmepụtaederede iwu mgbeọbụlaiwu gbanwere.
Karịa600，Facebook Like，Google Adsense，Google Analytics（分析），LinkedIn，Twitter，Alexa Metrics，Amazon Associates；埃多兹亚娜乌索罗奥佐.
Ndi Iubenda GDPR恩吉克尔?
Azịzankwụsị-Ee。 GDPR的Iubenda na-enyengwọtazuru oke iji soro.
Na ego nke $ 39 / mo（哎呀！），Usoroahụga-enyere aka：
Gosipụtaọkọlọtọkuki naịhapụkuki njirimaranaanịmgbe e nyere nkwenye，na
Sochie，ndekọ，ma weghachite njirimara onyeọrụnangwaọrụnchịkwaNzuzo.
Shopify na-enyengwáọrụdịmfe ebeịnwere ikeịmepụtankwụghachiụgwọna usoro nke iwuọrụmaka n’efu.
ikeị "Hụnaịga-achọikpe ikpe" 伊格·马·梅普塔·伊武·恩祖佐·格·恩富.
Tinye Nzuzo Nzuzo G’n’ime易北河Taa
ez ez ie ieịịblog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blogụụụ Reallychọghịiheọbụlaịchọrọka amachibido ya nanetwọkụMgbakwunyegịmaọbụụbụonye onyeọbịawebsaịtịna-agbaakwụkwọ.
Chebe onwegịsite na iji otu n’imengwaọrụndịdịn’elu ijimepụtaiwu nzuzogịugbu a，ịghghịechegbu onwegị！ Usoroahụga-enyekwaragịakaịmataonwegịnankọwabara uru na nzuzo onyeọrụ.